I-Leo's Lodge-Intliziyo yeCinque Terre
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPierpaolo
Phezu kwengxondorha, umbono omangalisayo wolwandle, kanye kwiNdlela eBlue, eCinque Terre National Park!
Kwi-Leo's Lodge uya kufumana ubugcisa, imbali, indawo, inkcubeko, indalo ecocekileyo, iimbono ezimangalisayo zolwandle, kunye nethuba lokuphila ngokwenene "la Dolce Vita".
Kubantu abathandanayo, kubakhenkethi abanomdla abanqwenela ukuphonononga lo mmandla umangalisayo ngeenyawo okanye ngabo banqwenela nje ikhefu elizolileyo ukuze uphumle kwaye uphumle, ikhaya lethu liqhekeza leparadesi oyifunayo!
I-CODI CITRA: ESENTE
I-Leo's Lodge sisakhiwo sendlu yamatye yasemaphandleni kwiminyaka engama-400 eyadlulayo ekhuselwe yi-UNESCO, elungiselelwe abahambi abanomdla.
Imi encotsheni yeliwa eliphumela elwandle, lijonge emazantsi.
macala onke kukho imithi yomnquma nemithi yeziqhamo, izidiliya nolunye uhlaza lwaseMeditera.
Ilungile ecaleni kweNdlela yeBlue (Sentiero Azzurro), kwi-hamlet PREVO kwisiqingatha sendlela phakathi kweCorniglia kunye neVernazza kwindawo ephezulu kunye neyona nto inomtsalane (i-208 m. ngaphezu komphakamo wolwandle) kunye nombono wolwandle ophefumulayo.
I-Lodge iye yahlaziywa ngencasa kunye nokulula, izama ukugcina kangangoko iingcambu zayo zembali.
I-Leo's Lodge ifikelelwa ngeenyawo nangemoto.
Uya kuba neendawo ezimbini zokupaka kwindawo yethu yokupaka yabucala kwiimitha ezingama-50 ukusuka endlwini.
Sinikezela, simahla, inkonzo yokudlulisa ukusuka / ukuya kwisikhululo sikaloliwe saseCorniglia ukuze ukhangele kwaye uphume.
Kwi-Leo's Lodge kukho amagumbi amabini okulala, iDolphin Room kunye neGumbi leShark, ngalinye linegumbi lokuhlambela + langaphakathi / langaphandle ikhitshi kunye negadi enkulu enepiknikhi yendawo, ibarbecue kunye ne-oveni yomthi.
Kubalulekile: ukuba kuya kuba nemvula alikho igumbi lokuhlala!
Kuphela kumnyango okwintendelezo yeLeo's Lodge ekwabelwana ngayo nam.
I-Leo's Lodge ibizwa ngegama lika-Leo, inja yam yeqhawe: undisindise ngo-Okthobha wama-25, 2011 ngexesha lomkhukula xa kwasweleka abantu abalithoba, ngenxa yoku waphumelela iMbasa yeZizwe ngezizwe yokunyaniseka kweNja kunye namaphephandaba amaninzi kunye nomabonwakude athethe ngembali yakhe ngeenxa zonke. Umhlaba.
INTSHAYELELO OKUBALULEKILEYO - FUNDA KUDE KUBE ESIPHELO
ILeo's Lodge yindlu yamatye eyakhiwa malunga neminyaka engama-400 eyadlulayo, kwaye ingqongwe yindalo. Izilwanyana zasendle ezinjengeehagu zasendle, iimpungutye, iimpuku nezinye izilwanyana zihlala zihlala kulo mmandla.
Akukho zingxaki zithile ukuba uqwalasela imigangatho yokuphila ezilalini, kodwa ukuba ubomi basemaphandleni abukho kuwe kwaye awuziqhelanisi nokulungelelana kungcono ukuba ubhukishe igumbi lakho kwenye yeelali.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuba ukuhlala kwakho endlwini yethu kuphumle kwaye kukhululeke kangangoko kodwa ubomi basemaphandleni bunamandla kunye nobuthathaka babo.
Igumbi leDolphin - abantu aba-2
Ibhedi yobukhulu beKumkanikazi (140 x 200 cm)
Ifeni eshushu/ebandayo (akukho moya wokupholisa)
Igumbi leShark - abantu aba-3
Ibhedi ephindwe kabini-ibhedi
Igumbi lokuhlambela ngaphakathi (wc, bidet, sink), ishawari kwelinye igumbi kwiimitha ezi-5
KUBALULEKILE KAKHULU: asikho kwidolophana yaseVernazza, sikwindawo yokulawula yaseVernazza kwi-hamlet ebizwa ngokuba yi-PREVO, i-2 km ngaphambi kweCorniglia.
Ukuba ufika apha ngemoto kucetyiswa kakhulu ukuba ulandele imiyalelo kunye neemephu ozifumana kwikhonkco u-Airbnb aza kuthumelela lona emva kokuba ufumene isiqinisekiso sokubhukisha.
Umbuki zindwendwe ngu- Pierpaolo
Ndihlala eLodge kwigumbi lam labucala, ndohlulwe kumagumbi enu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vernazza